Makore makumi maviri anowana mukugadzira fenicha yematanda emawere, emirambidziro, imba yekurara, imba yekudyira seti, imba yekutandarira yakaiswa | Goodwin fenicha
Kuzvininipisa Luxury hunyanzvi, Nguva inopupurira iyo chaiyo manzwiro!
Kudya imba yemhuri
Kurarama Kwemakamuri Kugara
Kudzidza mukamuri fenicha
Kupera Kwakakura Yakatemwa Series
Kuzvininipisa Luxury hunyanzvi,
Nguva inopupurira manzwiro echokwadi!
Chinangwa chedu ndechekugutsa vatengi vedu nehunyanzvi hwepamusoro uye hwakavimbika mhando kuona kuti mutengi wese anogona kunzwa kugadzikana uye kuvimba nezvinhu zvedu mumashandisirwo avo.Zvigadzirwa zvedu zvakanyanya kuwana kwavo kunyorera kubva kumusika nekuda kwezvinhu zvakanaka. Ivo vane zvakawanda maficha izvo zvinowanisa kufarirwa uye kushandiswa.
Dzazvino dhizaini yechinyakare sofa yemuti yakagadzirwa muChina | Goodwin GH59
Kumba ndiko kune moyo. Sarudza yakasarudzika, antique yechinyakare sofa yemapuranga ayo akatemerwa mutengo uye akagadzirwa zvakanaka kune kwako kurota kumba. Isu tiri inozivikanwa yechinyakare yeAmerican fenicha inogadzira muChina, Goodwin ndiyo sarudzo yako yakanaka. Taura nesu kuti uwane mamwe echinyakare emapuranga sofainfo. Bata: Tess Runhare: 0086-76923188817 kana nharembozha: 0086-13925525570 Webhusaiti: www.goodwinfurniture.com
China fekitori pasofa, antique nhema nhema pasofa yekutandarira Goodwin GH55
Takazvipira kugadzirwa uye kugadzirwa kweasiki nhema nhema pasofa yekutandarira kweanopfuura makore makumi maviri. Kuti utsvage zvirinani chigadzirwa mhando uye dhizaini. Goodwin fanicha, iyo nyanzvi yehupenyu. Isu tiri inozivikanwa yechinyakare yeAmerican fenicha inogadzira muChina, Goodwin ndiyo sarudzo yako yakanaka. Taura nesu kuti uwane mamwe ekare efa nhema pasofa yemahara info yekutandarira. Bata: Tess Runhare: 0086-76923188817 kana nharembozha: 0086-13925525570 Webhusaiti: www.goodwinfurniture.com
Goodwin Fenicha Yakanyanya Hot Kutengesa Mutengo Antique White Bhuronzi Bhurawuza Wooden GH43
Takazvipira kugadzirwa uye kugadzirwa kwemutengo unopisa wekutengesa wekare rekodhi rekabati kwematanda kwemakore anopfuura makumi maviri. Kutsvaira kune zvirinani chigadzirwa mhando uye dhizaini. Goodwin fenicha, muimbi wehupenyu.Isu tiri vane mukurumbira classic American Fenicha muChina, yakanakaWin ndiyo sarudzo yako yakanaka.Bata nesu kune mamwe anopisa anotengesa mutengo wetique White Bhuku reCourase Wooden Ruzivo.Bata: TSSPhone: 0086-76923188817 kana Nhare: 0086-1395525570Webhusaiti: www.magiraffine.com
Villa dhizaini yekuuya nyowani antique yeganda mubhedha | Goodwin GF01
Mutsva wekuuya antique yeganda mubhedha ndicho chigadzirwa chedu chikuru, huni yakasimba imba fenicha inosanganisira yekurara, masofa, maseti ekudyira, matafura ekofi, matafura, zvigaro, mibhedha, nezvimwe. Premium mhando, iconic dhizaini. Isu tiri vakakurumbira vekare veAmerican fenicha inogadzira muChina, Goodwin isarudzo yako yepamusoro. Taura nesu kuti uwane imwe nyowani yekuuya antique yeganda yemubhedha info. Bata: Tess Runhare: 0086-76923188817 kana nharembozha: 0086-13925525570 Webhusaiti: www.goodwinfurniture.com
Customization sevhisi yakasarudzika kana yakaoma bhizinesi zvinodiwa.
1.Mubvunzo: Vatengi vanotaurira chaunoda fomu chinhu, mashandiro emabasa, hupenyu hwekutenderera, uye zvinodiwa kutevedzera.
2. Dhizaini: Dhijitari dhizaini inosanganisirwa kubva pakutanga kweprojekti kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi ..
3. Quality Management: Kuti tigone kupa zvivakwa zvemhando yepamusoro, tinochengetedza zvinobudirira& inoshanda Quality Management System.
4. Mass Production: Kana maprototypes angosimbiswa dhizaini maererano nechimiro, mashandiro, uye kudiwa, kugadzirwa idanho rinotevera.
5. Tinogona kuronga kutakurwa kwemaodha - kungave kuburikidza neyedu medmodal services, vamwe vatengesi kana mubatanidzwa wezvose zviri zviviri.
Isu takanyatso nyudzwa mune ino chigadzirwa nyika yevatengi vedu. Asi isu hatisi kungonyura mune chaiwo maficha echikamu; tinoongorora zvakare mibvunzo yakadai seiyi: "Chii chinoita kuti vatengi vedu vatengi vafare?" "Tingaitisa sei kuti vatengi vatenge kuda kutenga?" Izvi ndizvo zvatichaita newe. Aya ndiwo maratidziro atinoita chirongwa chako muchirongwa chedu.
Nguva pfupi yadarika madekwana kubva kune vatengi vedu vekupedzisira kutenderera nyika
Nguva pfupi yadarika madekwana kubva kune edu ekupedzisira vatengi kutenderera nyika.Isu tiri maAmerican Style Solid Wood Fenicha Stopfer Goodwin Fromin Nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi yepamusoro service, zvigadzirwa zvedu zvakafukidzwa mukona imwe neimwe yenyika.VAKAWANDA vatengi vanotenga fenicha kubva fekitari yedu uye vakafanana nemidziyo yedu yakawanda kwazvo seyevhidhiyo mhinduro.Taura nesu kune mamwe midziyo yakasimba yehuni.Bata: TSSPhone: 0086-76923188817 kana Nhare: 0086-1395525570Webhusaiti: www.magiraffine.com
Goodwin Wholesale mutengi mune yake yekunongedza kupa mhinduro
Vhidhiyo chaiyo uye mhinduro kubva kune yedu mutengi. Iye anoda zviyo zvedu zvakanyanya.Yakagadzirirwa dhizaini yemidziyo inowanikwa.Ndapota taura nesu kune mamwe midziyo yakasimba yehuni.Bata: TSSPhone: 0086-76923188817 kana Nhare: 0086-1395525570Webhusaiti: www.magiraffine.com
Nyanzvi yekofi yekofi mune yedu vatengi 'exhibition Hall WA219
Sarudza yakanaka yeiyo yakasimba-yakasimba yemhepo fanicha yeyako (yeimba yekugara / yekurara / yekudyira imba / nezvimwewo). Sarudza kubva kune edu akasiyana magadzirirwo uye wedzera kune yako yekamuri yekushongedza. Shop online.Bata nesu kuti uwane mamwe maitiro akasimba ehuni yehuni.Bata: TSSPhone: 0086-76923188817 kana Nhare: 0086-1395525570
Goodwin Fenicha Byby WA184 Kudyira Yakatemwa mufekitori yevatengi vedu
Goodwin Fenicha ndeye huni huni yekudyira set set seturity kubva kuChina. Makore makumi maviri emabhenari export ruzivo. Nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi yepamusoro service, zvigadzirwa zvedu zvakafukidzwa mukona imwe neimwe yenyika.Isu tiri vane mukurumbira classic American Fenicha muChina, yakanaka ruzivo rwako rwakanakisa.Taura nesu kune mamwe matanda emapuranga ekudya set info.Bata: TSSPhone: 0086-76923188817 kana Nhare: 0086-1395525570Webhusaiti: www.magiraffine.com
Dongguan Goodwin Samani Co, Ltd
Dongguan Goodwin Furniture Co, Ltd yakavambwa muna 2001, iri muHoujie, Dongguan, guta rakakurumbira rekugadzira muChina, rakafukidza nzvimbo inosvika zviuru zana nemakumi matanhatu emamita. Isu tinotarisa pakakwirira-kumagumo eAmerican masitayiti akaoma huni fenicha, uye vakazvipira kugadzirwa, kugadzirwa uye kutengesa kwehotera / fenicha yemumba
Parizvino, isu tine vanopfuura vashandi mazana mashanu nemakumi masere, kusanganisira vangangoita zana einjiniya uye vehunyanzvi manejimendi vashandi pamatanho akasiyana. Iyo yakanakisa dhizaini timu uye timu yebasa, inonamatira kune kugona kwehunhu hwechigadzirwa uye kutsvaga kwehunyanzvi hwakakwana. Sehunyanzvi hwekugadzira fenicha, tinoshandira pamwe nemabhizinesi mazhinji anozivikanwa epamba saSheraton, Shangri-La, InterContinental, Marriott, Ritz Carlton, nezvimwe. Zvichakadaro, zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pasi rese, kunyanya muRussia, Ukraine, Lithuania , Bulgaria, France, Dubai nedzimwe nyika zhinji. Vese vatengi vanogutsikana nehunhu hwedu.
Goodwin Furniture inoomerera kune pfungwa yekusimudzira kusimudzira, yakanangana nekupa vanhu mhando yepamusoro fenicha uye hupenyu hwakanaka. Tine chivimbo chekuti chigadzirwa chedu mhando uye chimiro zvinogona kuzadzisa zvaunoda. Noushamwari vese vepasi rese vatengesi vebhizinesi kuti vatisangane nesu uye vashanyire fekitori yedu!